ထမင်း လက်ဆုံ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
I got warmth by reading ur lovely post.
ခုမှ အသစ်ဖတ်၇တော့တယ် ကျေးဇူး အစ်မရေ
မချိုသင်းရေးထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့ 
မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး ကို လွမ်းမိတယ် ။
မောင်နှမတွေ များတော့ လုစားကြရတာလေးတွေလည်း သတိရမိတယ် ။
တကယ့်ကို ပျော်စရာ အချိန်လေးတွေပါပဲ နော် ..
ခုတော့ တနေ့ တနေ့ထမင်းဗူးထဲက အေးစက်စက်အစားအစာ တွေ ကိုစားရင်းနဲ့ 
အလုပ်လုပ်ဖို့အသက်ဆက်နေရသလိုပါပဲလေ ။
( အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံအောင် အဖေါ်ရှာအုံးမှ နဲ့ တူပါ တယ် ...း) ).. ကြောင် ငြာ ဝင် သွား ပါသည် ..
ဟုတ်တယ် အမ... ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်က လက်ဆုံစားခဲ့ရတဲ့ ညစာတွေကိုလွမ်းမိတယ်။
အခုလို ဆောင်းတွင်းမှာဆို ညစာစားတာ နည်းနည်းစောတတ်တယ်လေ။ မေမေက ထမင်းဟင်းချက်၊ အမက ပန်းကန်ဆေး၊ ကျွန်တော့်ကတော့ ထမင်းစားပြီး စားပွဲကိုရှင်း၊ သုတ်၊ ရေနွေးပန်းကန်ဆေး။
ထမင်းစားပြီး အချိုတည်းမယ်ဆိုပြီး တခုခုတော့စာတတ်သေးတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေသလို အဟာရရှိအောင်ပဲ စားလိုက်ရတာပါပဲ။
အမေ့အိမ်ကိုလွမ်းသွားတယ် မမရယ် ...
အသက်တွေပြန်ငယ်ချင်လိုက်တာ မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကို လွမ်းလို့။ မိဘတွေကိုလည်း အသက်ပြန်ငယ်စေချင်လိုက်တာ။
Cho Thin, Just read, I cant wait to write comment, that's why , I am reading and writting in office, so can't use Myanmar fonts.Very nice post, simple and meaningful, I miss my family's togetherness at dinner time too. Take care and love you so much for this post:D
BTW,nowadays I am reading your older posts at my lunch time ...and enjoy so much , especially Telephone post. Your dad is just like my husband , he still doesn't know how to make the fully use of phone menu, har har :D
ခုခေတ်မှာ .. တစ်နေရာစီ အလုပ်တွေနဲ့
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာ မိသားစုနဲ့ အတူ ထမင်းလက်ဆုံ စားခွင့်ကို အမြဲမရကြဘူးလေ.. တမ်းတစရာပဲပေါ့..
မိသားစုထမင်းဝိုင်းကို သတိရလို့ ညကြီးသန်းခေါင် စာ ထရေးဖူးတယ် (ဒိုင်ယာရီထဲမှာပါ)..။ ဒါပေမယ့် အစ်မရေးထားတာဖတ်ပြီးတော့ အလွမ်းတွေတောင်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး..ရယ်ချင်လိုက်တာ..ရုံးမှာမိုလို့ မျက်နှာပိုးမနဲသတ်ထားရတယ်..ခိ..။
အိမ်မှာ အသင့်စားရတာကို လွမ်းတယ်။
ဆိုင်သွားပြီး စားကြတာကိုလဲ လွမ်းတယ်။
(ချိုသင်းရေ ကျေးဇူးပါပဲ၊ အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း၊ ရုံးဆင်းခါနီး ချိုသင်းပို့စ် ဖတ်ရတာ။)
ချိုသင်း အစားကောင်းတာကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး၊ ပြောတာ များနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ကို နည်းနည်းပေး တောင်းတဲ့သူက ချိုသင်းသာလျှင် ဖြစ်ရမယ်လို့ မျက်စိထဲ မြင်မိပါတယ်။ :P
ငါတို့က နဂိုထဲက မိသားစု နည်းတော့ ထမင်းဝိုင်းက ခပ်သေးသေးပဲ။ ငယ်ငယ်က ခြောက်နာရီ (အတိ) ထမင်းဝိုင်း ဝင်ရတာကို သတိရသေးတယ်။ ဆယ်တန်းလည်းအောင်ရော အမေလည်း ငါ့ကို ဖမ်းမမိတော့ဘူး။ :(
ခွိ.. အန်တီချိုသင်းတို့များ ရေးတတ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။
အင်းပေါ့လေ အကြောင်းသိကုန်ပြီကိုး.. :PPP
ခုန ရုံးဆင်းခါနီးကြီးမို့ အမြန်ရေးလိုက်ရတာ။
တကယ်ပဲ ဒီ post ဖတ်ရတာ လွမ်းတာထက် ရီချင်မိတာက ပိုတယ်။ ပထမဆုံး အတူထမင်းစားကြတဲ့ အကြောင်းလေးကို။
ငယ်ဘ၀တွေကို ပြန်လွမ်းသွားရင်း ပုဇွန်ထုပ်ကြီး အားရပါးရ စားတဲ့ ချိုသင်းရယ်..ဘေးမှာ ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်လိုက်..မျက်နှာလေးပျက်သွားလိုက်နဲ့ အိပ်ကပ်ကို မသိမသာစမ်းလိုက် လုပ်နေတဲ့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပါ ဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်(အဟောင်း)မှာ ပြန်မြင်ယောင်မိနေပြီး ရယ်ချင်နေတယ်...ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ချိုသင်းရေ...
ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းသွားစားခဲ့တုန်းက အဲဒီလို အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးတယ်အမ၊
မမချိုသင်းရေးတာဖတ်ပြီး ပျော်လဲပျော်..လွမ်းလဲလွမ်းရတယ်။ ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ အမေ၊ မောင်လေးတို့နဲ့ ထမင်းစားပွဲခုံကြီး ရှိရက်နဲ့ စားပွဲသေးလေးမှာ ၀ိုင်းထိုင်ပြီး အတူလက်ဆုံစားရတာကို သတိရတယ်။ (အဖေက ခရီးအမြဲထွက်သူရမုိ့ သုံးယောက်ပဲလက်ဆုံ စားဖြစ်တယ်။) ခုတော့ သုံးယောက်တောင် မဆုံနိုင်သေးဘူးမမရေ။
p.s. မမလာလည်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ တစ်အားဖြစ်စေတဲ့ ကွန့်မန်တွေအတွက်လည်း ထပ်လောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
မချိုသင်းရေးထားတာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ် အစ်မရေ... ၀ါလည်းဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်မှာ ပုဇွန်ထုတ်
နဲ့ ထမင်းစားဖြစ်တာလေး သတိရသွားလို့လေ။
အမျိုးသားက ကျွေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသားရဲ့သူငယ်ချင်းက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်မှာ ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်လို့ ၂ယောက်သားအတူလိုက်သွားကြတာလေ။သူတို့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်က စကားတပြောပြောနဲ့ပေါ့။
ကျွန်မကို ဘာဟင်းနဲ့မှာမလဲပြောတော့ ပုဇွန်ထုတ်ဟင်းပဲ
မှာဖြစ်တာပေါ့နော်.း) သူတို့တွေက တခြားဟင်းတွေစားကြတယ်လေ။ကိုယ်ကလည်း ရောက်တုန်း စားချင်တာပဲ စားမယ်ပေါ့။
ပိုက်ဆံသိတ်ရှိတာမဟုတ်ဖူး အမီးက ပုဇွန်ထုတ်သွားမှာ
တယ်ပြောတယ်လေ.း) အစ်မပြောသလိုပဲ
မှာချင်သာတာမှာ ပုဇွန်ထုတ်မပါစေနဲ့လို့ ကြိုပြောပေါ့နော်.း))
သတိရသွားလို့ ၀င်မန့်သွားပါတယ် မချိုသင်းရေ။
ထမင်းလက်ဆုံ စားခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ
ကျွန်တော့်အဖေလည်း မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကို သိပ်မက်မောတာ...။ အဲဒီတုန်းကတော့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ “၀မ်းချင်းဆုံတာမှမဟုတ်တာ အဖေရာ”လို့..။ ခုမှပြန်တောင်းတမိတယ်။ နောင်တရမိတယ်။ တကယ်တော့ နားလည်ပါပြီလေ..... အဖေဘာကြောင့် ထမင်းဝိုင်းလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတာ....
ထမင်း နှစ်နပ် ? ကမယ်မထင်ဘူး
ခံနဲ့ ပြန်ပြော :D
မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး။ အမေရယ် ကျမရယ် နှစ်ယောက်ထဲ... သတိရမိတယ်။
သူပြောတာ တိုးတိုးလေး ကိုယ် အကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရတယ် ။ :))
အကြောင်းတွေ သိကုန်ရင် ဒီလိုပဲ ချိုသင်းရ။
အော်.ကိုကျော်ဝဏ္ဏက ဒီဒုက္ခတွေ ခါးစည်းခံရတုန်း
အမချိုသင်းရော ကိုကျော်ဝဏ္ဏရော ချစ်တတ်လိုက်ကြတာ... ကံကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးနေတယ်... ပုဇွန်တုပ်ကြီး အကြောင်းရောက်တော့ ရီလိုက်ရတာ ဖြစ်ရမယ်လေ ကိုယ့်အမပဲ...
ညည်း ထမင်းနှစ်နပ်မကတာတော့ သေချာတယ်း))
ငယ်ငယ်က ထမင်းဝိုင်းလေး ကတော့ ဘယ်တော့မှ
fall leaf said...
(ရွှေဘ မှာတော့ မကြာခဏစားဖူးပါတယ်..)
မမမိုးချိုသင်းရေ မမန့် ဖြစ်ပေမယ့် အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အရေးအသားလေးတွေကို နှစ်သက်မိလို့ ပါ ရသမျိုးစုံပေးနိုင်ပြီး အနုပညာမြောက်အောင် ရေးဖွဲ့ တတ်လို့သဘောကျမိတယ် မမစာလေးတွေများဖတ်မိရင် မျက်နှာလေးကို အမြဲပြုံးမိစေတယ်
ခုပို့ စ်လေးဖတ်ပြီးလည်း ပြုံးမိတယ်
ပုစွန်တုပ်ဆိုလို့ လေ ငယ်၂က အဖြစ်ကလေး
အမှတ်ယမိသွားတယ် အိမ်ကို ဧည့်သည်တွေလာလို့ရွှေဘထမင်းဆိုင်မှာလိုက်ကျွေးတာ ဒုတိယညီမလေးက သိပ်နှမြောတတ်တာ အဲ့ဒီတော့ သူက အပေါ်မော့ကြည့်ပြီး ဟင်းနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေလိုက်ဖတ် ပြီး မှာလိုက်တယ် ပုစွန်တုပ်ဆိုပြီး စားပြီး ရှင်းတော့မှ သိတယ် အဲ့တုန်းက ပုစွန်တုပ်ဟင်း တပွဲံ ၄၀၀ လေ ဈေးအကြီးဆုံးပဲ ဒါကို မီးမီးက ၄၀ ဆိုပြီး ဖတ်မိတာတဲ့ သူတို့ က သုညတလုံးကို ပုစိညှက်စိကပ်ရေးထားတော့ မော့ကြည့်တော့ မမြင်ရလို့ တဲ့ ရီလိုက်ရတာလေ အဲ့တုန်းကလည်း သူဆို စားပြီးမှ မျက်ရည်လေး စမ်း၂ နဲ့ 
အမရေ.. တနေ့ကို ထမင်း ၂ နပ်ပဲ စားရပေမယ့် အမပြောသလိုပဲ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ စားရမယ်ဆိုရင် ဟင်းမကောင်းပေမယ့် ထမင်း စားကောင်းပါတယ် အမရယ်.. :)
အမပို့စ်ဖတ်ပြီးတော့မှ ဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်က ပုဇွန်တုပ်ဟင်းစားချင်လိုက်တာ... :D
တစ်ရက်တစ်ရက်အစ်မ Blog ကိုပြေးပြေးကြည့်ရတာအမောပဲ။
အရမ်းကို ရေးတတ်တာပဲ၊ ဖတ်ပြီးတော့ ပျော်စရာလေးလို ခံစားရတယ်။ စာရေးကောင်းတဲ့ မကို အရမ်းလေးစားပါတယ် မ ရယ်။
Byte Billionaire said...
The price ofameal with Prawn in November 2009 is around 4000 Kyats. Among Da_Nu_Phyu Daw Saw Yee, Aung Thu Kha and Feel3 (Pyi_taung_Su Yeit Thar Road), Da_Nu_Phyu Daw Saw Yee is the best for Prawn! Aung Thu Kha is the best for overall and Feel3 is the best for declaration, desserts and rare dishes, for instance, Rabbit meat.
စာရေးထားတာလေး ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်..
နောက်... သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံပါဘဲ..။
ကိုယ်က ဆိုင်နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့မန္တလေးက
ပန်းချီ ကိုတိုင်းကျော် ဆွဲထားတဲ့ မဟာဗန္ဓုလ စစ်ချီနေတဲ့ဆီဆေးပန်းချီကားကို ငေးနေတုန်း သူငယ်ချင်း မှာလိုက်သံကို မကြားမိလိုက်ဘူး...။
ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဘဲသားအချိုချက်ကို မျိုလို့ တောင်
ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ ကြည်နူးမိပါတယ် မရယ်။
အချစ်စစ်စစ်များနဲ့ အမြဲပြုံးရွှင်နေတဲ့ မအပြုံးလေးကို ပြန်တွေးမိလို့လည်း ကြည်နူးရပါတယ်။
ထမင်း လက်ဆုံ တဲ့...
ဘယ်လိုမှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေး...
ဘယ်လို ဘယ်လိုမှ ကို ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ထမင်း လက်ဆုံ ၀ိုင်း လေးကို နာနာကျင်ကျင်နဲ့ လွမ်းလိုက်တာ။
ဥပုဒ်ကျောင်းလိုက်သွားပြီး ဥပုဒ်သည်တွေ ၀ိုင်းစားတဲ့ ထမင်းဝိုင်းကြီးကိုလဲ လွမ်းမိတာပါပဲ။
အစ်မ စာရေးကောင်းတယ်လို့မပြောတော့ပါဘူးနော်။ အစ်မပိုစ်တွေအကုန်လုံးကို ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။
အစ်မ ကြောင်လေးတွေနဲ့ လဲ ရင်းနှီးနေပါပြီ။
သမီးလဲ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းကို အရမ်းလွမ်းသွားပြီ မမတို့ဆီမှာပဲ အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လာစားတော့မယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကအချိန်တွေ တခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရချင်ပါတယ်အမရယ်...... မောင်နှမတွေကြား အဖေနဲ့အမေကြား ဟိုတိုးဒီဝှေ့ ရောက်ရောက်ရာရာလေးတွေကို မော့နေအောင်နားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်..
ခုတော့လဲ တနယ်စီခြားကုန်ပြီ အမရယ် ........တနယ်စီခြားကုန်ကြပြီ....
မိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပျော်စရာ ထမင်းဝိုင်းလေးအကြောင်း အမလဲ ရေးခဲ့ဖူးတယ်... တကယ်လွမ်းလို့ပါ...
မနေ့က ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ အိမ်မှာ ကင်မွန်းရွက်ချဉ်ဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆို ပန်းကန်ဆေးရမှာ စိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့အကြာင်း ပြန်တွေးနေရင်း ချိုသင်း ပိုစ့်တက်လာတာတွေ့တော့ ချက်ချင်း လာဖတ်သွားတာ... ရုံးမှာမို့ comment ရေးမသွားခဲ့ရဘူး...
လွမ်းစရာလေးတွေကို ပြုံးစရာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးရေးတတ်တဲ့ ချိုသင်းပိုစ့်လေးတွေကို အမြဲသဘောတကျနဲ့ မျှော်နေပါတယ်... (အချစ်တော် ကြောင်လေးတွေအကြောင်းလဲ ရေးပါအုံး...)
Above is my comment on Rita's blog. Just let you know
Yes I came acrossagirl who was only 20. She was so active against in brutality and dictatorship. Coz her father has beenapolitical prisoner. He is still behind that bars. Can we say it isageneration gap. that girl was only 20. Of course, if people ,like Rita, haveawide margin of view and more consideration with sympathy and empathy on general Burmese public , today's Burma would beanew country. that is what i believe.
မချိုသင်း ရေးသမျှ အရမ်းချစ်စရာကြည်ျနူးစရာ ကောင်းတယ်.. လူအတိုင်းပဲ..
အစ်မရေးမှ အိမ်ကိုပိုလွမ်းသွားပြီ။း(
ပုစွန်ထုပ်ဟင်းမှာမိလို့ ဘယ်တော့မှ ဒုက်ခမရောက်ဘူး။
အစ်မ စာလေးတွေက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ။ မန့် မလို့ ပါဆို scroll လှိမ့် နေရတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ :) X'mas မှာကော နှစ်သစ်ကူးမှာပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မ။
တက္ကသိုလ်မှာကတည်းက ရည်းစားရှိတာကို အခုမှပဲသိတော့တယ် ချိုသင်းရေ....
( ငါ့နှမ ရိုးလှလို့ထင်နေတာ...လက်စသတ်တော့..ဒင်းက..)
အဲဒီလို ထမင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်အမြဲလက်ဆုံစားရတယ် ဖေဖေကအဲလိုမှကြိုက်တာ ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ် ..
တခါမှ မန်မန် အဲလို မစားဖူးဘူးးးးးး
အမရေ ကျေးဇူးပဲ အမရဲ.စာတွေက အရမ်းဖတ်လို.ကောင်းပါတယ်